Waa kuwee labka ugu jinsiga badan ee Isbaanishka? | Ragga Stylish
Moodooyinka lab ee ugu caansan Spain
Waxaa ka mid ah magacyada lab ee ugu caansan Spain, waa Jon Kortajarena, Andrés Velencoso iyo Oriol Elcacho. Laakiin iyagu maahan kuwa kaliya ee ku guuleystey inay gaaraan meesha ugu sarreysa adduunka moodada.
Calaamadaha caalamiga ah ee ugu caansan, sida Loewe, Chanel ama Dior, waxay si isa soo taraysa ugu aaminaan soo bandhigida moodooyinkooda moodooyinka Isbaanishka ee soo jiidashada leh, kuwaas oo sameynaya saameyn sii kordheysa
1 Qaar ka mid ah moodooyinka labka ah ee Isbaanishka, lagama maarmaanka ah
1.1 Andres Velencoso
1.2 Diego Barrueco
1.3 Jon kortajarena
1.4 Oriol Elcacho
1.5 Ignacio Ondategui
1.6 Wabiga Viiperi
1.7 Anthony Navas
Qaar ka mid ah moodooyinka labka ah ee Isbaanishka, lagama maarmaanka ah
Catalan-kan (sawirka daboolka ah), oo ka mid ah kuwa ugu badan ee laga codsaday moodooyinka Isbaanishka, ayaa la ogaaday 2001, xirfaddiisana waa la xoojiyay. Waxa uu si buuxda u soo galay adduunka "caan ka ah", sababtoo ah xiriirkiisa uu la leeyahay Kylie Minogue. Waxa kale oo uu ka soo shaqeeyay qaar kaalinta Jennifer López.
Diego wuxuu nasiib u yeeshay in mid ka mid ah hay'adaha leh culeyska gaarka ah ee ugu weyn adduunka moodada ee New York, IMG, ay ogaatay. Ma sii dheeraan laheyn la shaqee shirkadaha muhiimka ah sida Puma ama Nike.
Waxay ku jirtaa meesha ugu sareysa ee qiimeynta moodellada ragga. Waxay ku bilaabantay adduunka moodada nasiib ahaan, intaad saaxiib lasocoto, wixii intaa kadambeeyana waxwalba waa lagu guulaystay.
Ninkan Barcelona ayaa loo tixgeliyey inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu jimicsiga badan moodooyinka Spain iyo Yurub oo dhan. Oriol wuxuu la shaqeeyay shirkado aad muhiim u ah, sida Ralph Lauren, Chanel ama Valentino, iyo kuwo kale.
Hibo dabiici ah, muuqaal jireed oo hinaase leh iyo astaamo aad u calaamadeysan, ayaa qeyb ka ah astaamihii horseeday Annie Leibovitz, waa mid ka mid ah sawir qaadayaasha ugu caansan adduunka, inay la shaqeyso.
Wabiga hooyadiis sidoo kale waxay ahayd tusaale, waxayna ku dhex socotaa qoyska. Maxaa intaa ka badan, xiriirka uu la leeyahay Paris Hilton dhammeeyay isaga oo kaxeynaya adduunka moodada iyo soo jiidashada.
Antonio dhererkiisu waa 1.88 mitir, wuxuu leeyahay indho cawlan oo sasabasho leh, wakaalado muhiim ah oo adduunka ahna kama gaabinin inay ogaadaan Ha la soo shaqeeyay Dior, Armani, Loewe, iyo qaar kaloo badan.
Ilaha sawirka: Totalisimo.Com / Vanitatis - Sirta ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Moodooyinka lab ee ugu caansan Spain
Shan qaybood oo qaab-guris ah xagaagan